Tag: fiantohana | Martech Zone
Talata, May 28, 2019 Talata, Jona 4, 2019 Douglas Karr
Satria ny traikefa niomerika dia nanjary faritra ambony nifantohan'ny orinasa Serivisy ara-bola, ny dia nataon'ny mpanjifa (touchpoint nomerika manokana hita manerana ny fantsona) no fototry izany traikefa izany. Azafady mba hiaraha-miasa aminay satria manome hevitra momba ny fomba fampivelarana ny dianao manokana hahazoana fahazoana, fiantsonana, fitazonana ary fampitomboana ny lanjanao amin'ireo mpanjifanao sy ny mpanjifanao. Hojerentsika ihany koa ireo dia misy fiantraikany lehibe indrindra ampiharina amin'ny mpanjifanay. Daty sy ora Webinar Ity dia a
OneLocal: Fitaovana fitaovam-barotra ho an'ny orinasa eo an-toerana
Alakamisy Oktobra Oktobra 12, 2017 Zoma, Oktobra 13, 2017 Douglas Karr
OneLocal dia fitaovana fampitaovana marketing natao ho an'ny orinasa eo an-toerana hahazoana fitsangatsanganana an-trano, referral, ary - farany - hampitomboana ny vola miditra. Ny sehatra dia mifantoka amin'ny karazana orinasam-panompoam-paritra rehetra, mandany ny fiara, ny fahasalamana, ny fahasalamana, ny serivisy an-trano, ny fiantohana, ny trano, ny salon, ny spa, na ny indostrian'ny varotra. OneLocal dia manome efitrano iray hisarihana, hitazomana ary hampiroborobo ny orinasanao madinidinika, miaraka amin'ny fitaovana ho an'ny faritra rehetra amin'ny dian'ny mpanjifa. Manampy ireo fitaovana miorina amin'ny rahona an'ny OneLocal
Faminaniana: Ho orinasa E-varotra ny orinasanao
Alakamisy, Jona 11, 2015 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Douglas Karr
Nahita ny tranokalanay vao natomboka ve ianao? Tena mampino tokoa. Niasa tamin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny famoahana anay nandritra ny 6 volana mahery izahay ary tsy afaka milaza aminao ny fotoana laninay. Ny olana dia tsotra fotsiny fa tsy afaka namolavola haingana isika mba hahavitana haingana haingana. Raha ny fahitako azy, na iza na iza manangana lohahevitra iray hatramin'ny voalohany dia manao tsinontsinona ny orinasa iarahany miasa. Afaka nivoaka aho
Asabotsy, Aprily 26, 2014 Zoma, Aprily 25, 2014 Douglas Karr
Amin'ny antsalany, ny mpanjifa dia mahazo hafatra mailaka ara-barotra 416 isam-bolana… mailaka be izany ho an'ny olona salantsalany. Betsaka ny olona mamaky mailaka mifandraika amin'ny volan'izy ireo sy mivezivezy noho ny sokajy hafa… ary zava-dehibe ny manamarika fa tsy misoratra amin'ny mailaka fotsiny ny mpamandrika - misoratra anarana amin'ny mpifaninana aminao koa izy ireo. Ny fiantohana ny mailaka nataonao tsara sy mamaly ny fitaovana finday dia farafahakeliny faran'izay ambany. Manana mailaka mandresy lahatra ny